Himalaya Dainik » के पुरुषको कारणले हुन्छ महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर ?
के पुरुषको कारणले हुन्छ महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर ?
पछिल्लो नेपाली तथ्याङ्क अनुसार पुरुषमा मुुख्यतयाः फोक्सो, आमाशय, कलेजो, मुखको क्यान्सर बढी देखिएको छ । महिलामा पा-ठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, फोक्सोको क्यान्सर बढी हुने गरेको छ ।
क्यान्सरको प्रकार अनुसार रगत, लिम्फ आदि माध्यमबाट शरीरको अन्य भागमा पनि पैmलिन गई विरामीको मृत्यु पनि हुन्छ
साधारण र खतरनाक खालको गरी ट्युमर पनि दुई खालका हुन्छन् । खतरनाक खालको ट्युमरलाई नै क्यान्सर भन्ने गरिन्छ । क्यान्सरको समयमै उपचार गरिएन भने क्यान्सर लागेको अङ्गका नजिकका तन्तुलाई पनि यसले बिस्तारै असर गर्न थाल्छ । क्यान्सरको प्रकार अनुसार रगत, लिम्फ आदि माध्यमबाट शरीरको अन्य भागमा पनि पैmलिन गई विरामीको मृत्यु पनि हुन्छ । नसर्ने रोगहरु मध्ये क्यान्सर एउटा जटिल रोग हो ।
क्यान्सर किन हुन्छ ठ्याक्कै भन्न नसकिएपनि ९० प्रतिशत क्यान्सर अस्वस्थ्यकर खानपिन, रहनसहन, वातावरणीय प्रभावले हुने विश्वास गरिएको छ । त्यस बाहेक १० प्रतिशतमा उमेर, लि-ङ्ग, वंशाणुगतर जातिको भूमिका छ ।
पा-ठेघरको मुखको कोषिकाको प्रोटिनसँग एचभीपीको प्रोटिनबीच रासायानिक प्रक्रिया हुँदा ती कोषिकामा परिवर्तन आउन थाल्छ र त्यस अवस्थाले क्यान्सर सिर्जना
विश्वमा प्रतिवर्ष पाँच लाख मानिसलाई पा-ठेघरको मुखको क्यान्सर हुने गर्दछ । अन्दाजी दुई लाख महिलाको यो रोगबाट मृत्यु हुन्छ । नेपालमा वर्सेनी करिब तीन हजार महिलामा यस प्रकारको क्यान्सर लाग्छ भने दुई हजार जतिको मृत्यु यसै कारणले हुने गरेको छ ।
कुनै निश्चित कारणले पा-ठेघरको मुखको क्यान्सर हुन्छ भनेर किटान गर्न नसकिने भए पनि करिब ७० प्रतिशत पाठेघरको मुखको क्यान्सर एचभीपी (ह्युमेन पापिलोमा भाइरस) सँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ । पा-ठेघरको मुखको कोषिकाको प्रोटिनसँग एचभीपीको प्रोटिनबीच रासायानिक प्रक्रिया हुँदा ती कोषिकामा परिवर्तन आउन थाल्छ र त्यस अवस्थाले क्यान्सर सिर्जना गर्दछ ।
जुन यो-नि–लि-ङ्ग मैथु-न, मु-ख मै-थुन वा गु-द्द्वार मै-थुनका बेला बढी हुन्छ । यौ-न स-म्पर्कका कारण एचपीभी नसर्ने भए क-ण्डमको प्रयोगले कसरी एचपीभी स-ङ्क्रमणको सम्भावना घटाउँछ भन्ने तर्क पनि हुनसक्छ । खासमा पुरुष लि-ङ्गको टुप्पाको छालामा बढी जसो एचपीभी रहने हुनाले यौ-नस-म्पर्कका बेला क-ण्डमको प्रयोगले सङ्क्र-मणबाट जोगिन सहयोग गर्दछ ।
यौ-निक रुपमा सक्रिय करिब ५० देखि ८० प्रतिशत महिला वा पुरुषकोजीवनमा एक न एक पटक एचपीभी स-ङ्क्रमण भएकै हुन्छ । जसरी कोरोना स-ङ्क्रमित सबैमा लक्षण चिन्ह नै देखापर्दछ भन्ने भएन त्यसरी नै एचपीभीबाट स-ङ्क्रमित सबैमा जननेन्द्रियको क्यान्सर हुनैपर्दछ भन्ने छैन । सामान्य र गम्भीर खालका गरी दुई प्रकारका एचपीभी हुन्छन् ।
गम्भीर खालकै एचपीभीबाट स-ङ्क्रमित भएको भए पनि बिना उपचार पनि आफै स-ङ्क्रमण निको हुन्छ । एचपीभी धेरै प्रकारका हुन्छन् तर १३ प्रकारका भाइरसले मात्र पा-ठेघरको मुखको क्यान्सर निम्त्याउँछन् । एसियामा ८३ प्रतिशत पा-ठेघरको मुखको क्यान्सर एचपीभी– १६ तथा एचपिभी–१८ को स-ङ्क्रमणले भएको पाइएको छ ।
यसरी ह्युमेन पापिलोमा भाइरसलाई प्रमुख कारक तत्व मानिएपनि कम उमेरमा विवाह हुनु, कम उमेरमै यौ-न स-म्पर्क स्थापित हुनु, एक भन्दा बढी जना सँग यौ-नस-म्पर्क राख्नु, कम उमेरमा अनि धेरै बच्चा पाउनु, आफ्नो गो-प्य अ-ङ्गको उचित सरसफाई नगर्नु, चुरोट, खैनी तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नु, यौनरोग एवं गुप्ता-ङ्ग सम्बन्धी दीर्घरोगी हुनु पा-ठेघरको मुखको क्यान्सर लाग्नाको अन्य कारण हुन् ।
धुमपान गर्नेहरुमा एचपीभी स-ङ्क्रमण लामो समयसम्म रहिरहन्छ भने धुमपानकै कारण पनि पा-ठेघरको मुखको क्यान्सर र यौना-ङ्ग वरिपरि क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ । धार्मिक रुपमा सानैमा केटाको लि-ङ्ग वरिपरि छाला ताछेर फ्याँक्ने यहुदी एवं मुस्लिम समुदायका महिलामा पा-ठेघरको मुखको क्यान्सर कम हुने गरेको पाइएको छ । अधिकतर एचपीभीबाट स-ङ्क्रमित मानिसले थाहै नपाई आफ्नो यौ-न साथीमा एचपीभी सारिरहेको हुन्छन् । किनकि तिनीहरु आफैँलाई आफू एचपीभीबाट स-ङ्क्रमित छु भन्ने छैन हेक्का हुँदैन ।
अतिरिक्त एसिटिक ए-सिड वा ल्युगोल आयोडिनको प्रयोगबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ । विवाह गरेको दुई/तीन वर्षदेखि नै नियमित रुपमा स्क्रिनिङ गराउनु बुद्धिमानी
पा-ठेघरको मुखको -क्यान्सरको आरम्भिक अवस्थामा कुनै लक्षण नदेखिन सक्छ । प्रभावित महिलामा असामान्य रग-त तथा रग-त मिसिएको ग-न्हाउने यो-नीश्राव देखा पर्ने पनि हुन्छ । त्यसैगरी यौ-नस-म्पर्क पश्चात् रग-त देखा पर्ने वा महि-नावारी पनि धेरै दिनसम्म वा बढी मात्रामा रग-त बग्न सक्ने हुन सक्छ । प्रारम्भिक अवस्थामा कुनै पी-डा नभएपनि क्या-न्सर पैmलिसकेपछि भने पीडा हुन थाल्छ । पछि खुट्टा सुन्निने, पेट फुल्ने, पिसाब नहुने, कम्मरको हड्डी दुख्ने आदि लक्षण देखिन सक्छन् ।
गम्भीर खालकै एचपीभीबाट स-ङ्क्रमित भएको भए पनि बिना उपचार पनि आफै सङ्क्र-मण निको हुन्छ । एचपीभी धेरै प्रकारका हुन्छन् तर १३ प्रकारका भाइरसले मात्र पा-ठेघरको मुखको क्यान्सर निम्त्याउँछन् । एसियामा ८३ प्रतिशत पा-ठेघरको मुखको क्यान्सर एचपीभी– १६ तथा एचपिभी–१८ को स-ङ्क्रमणले भएको पाइएको छ ।
नियमित स्वास्थ्य जाँचको क्रममा प्याप स्मियर नामक स्क्रिनिङ विधिबाट पा-ठेघरको मुखको श्राव निकाली क्यान्सर छ, छैन थाहा पाउन सकिन्छ । यसका अतिरिक्त एसिटिक ए-सिड वा ल्युगोल आयोडिनको प्रयोगबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ । विवाह गरेको दुई/तीन वर्षदेखि नै नियमित रुपमा स्क्रिनिङ गराउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
पा-ठेघरको मुखको क्यान्सरका कारक तत्व, लक्षण चिन्ह र रोकथाम माथि विचार गर्दा पुरुषको भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ । बालविवाह गर्ने वा गराइ दिने, बहुविवाह गर्ने, विवाहइत्तर धेरै महिलासँग यौ-न स-म्बन्ध राख्ने कार्यमा पुरुषको मुख्य भूमिका हुन्छ । त्यस्तै यौ-न सम्पर्कपूर्व आफ्नो यौ-नाङ्गको सरसफाई गर्ने तथा क-ण्डमको प्रयोग गर्ने कार्यमा पुरुषले -अल्छी गर्दा पनि यो समस्या आउन सक्ने देखिन्छ ।
आफ्नी छोरीचेलीलाई एचपीभीविरुद्ध खोप लगाइदिने तथा आफ्नो महिला यौ-न साथीलाई विवाहको केही वर्ष भित्रै पा-ठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ गराउन लाने जिम्मा पुरुषकै हो । तर कुनै समस्या नभइकनै आफ्नो श्रीमतीलाई नियमित स्वास्थ्य जाँचमा लाने त कुरै छाडौैँ म-हिनावारी गडबडी भएको, बढी रगत बग्न थालेको वा ग-न्हाउने पानी बग्न थालेको गुनासो गर्दा पनि वास्ता नगर्ने पुरुष पनि हुन्छन् ।
छोरा नपाएसम्म धेरै बच्चा पाइरहन दवाब दिने पुरुष पनि देखिएका छन् । यसले पनि महिला पा-ठेघरको मुखको क्यान्सरको थप जो-खिममा पर्दछन् । पुरुषले आपूm मात्र धुमपान, सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरी आपूmलाई विभिन्न रोगको जोखिममा पार्ने मात्र नभई महिलालाई समेत खतरामा पार्छन् र उनीहरुलाई ती पदार्थ सेवन गर्न उक्साउँछन् पनि ।
यसरी पा-ठेघरको मुखको क्यान्सर प्रत्यक्षतः महिलाको समस्या भएपनि यो समस्या हुनुमा तथा रोकथामको पहल नगराउनुमा, समयमै जाँचका लागि नलानुमा, आवश्यक उपचार नगराउनुमा पुरुषकै अहम् भूमिका छ । अतः महिलालाई यो प्राणघा-तक समस्याबाट जोगाउनु छ भने पुरुषले निर्णायक एवं परिणाममुखी पहल लिनै पर्दछ ।